‘सायाबुङ’ प्रदर्शनका लागि तयार
काठमाडौं । साया राईले निर्माण गरेको चलचित्र ‘सायाबुङ’ (शीरफूल)को विशेष प्रदर्शनीका लागि तयारी पूरा भएको छ । द पाल्म ग्रुप प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्र ‘सायाबुङ’ किरात राई सँस्कृतिमा आधारित चलचित्र हो । चलचित्रमा किरातीहरुको परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई समेटिएको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । चलचित्रको नाम किराती सभ्यता र भाषाबाट लिइएको भएपनि पनि […]
साम्राज्ञीको स्टारडम घटेकै हो त ? अाशा पाँचाैं प्रोजेक्टको
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रमा डिमान्डेड अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित पछिल्ला चलचित्रले बजारमा राम्रो व्यापार गर्न नसकिरहेका बेला आगमी असोज ५ गतेबाट ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ प्रदर्शन आउँदैछ । यस चलत्रिले उनको खस्केको स्टारडमलाई माथि उकास्ने निर्माण पक्षले दाबी गरेको छ । उनी स्वयंमले यही चलचित्रबाट सुपरहिटको ह्याट्रिक पूरा गर्ने आशा पनि राखेकी छिन् । त्यसो […]
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र अहिले नेपालमा मात्र प्रदर्शनमा आउँदैनन् । केही चलचित्र नेपालमा प्रदर्शन भएपछि विदेशमा प्रदर्शन गरिन्छन् भने केही चलचित्रको नेपाल रिलिज हुनु अगावै विदेशमा च्यारिटी तथा प्रियिर गरी नेपाली दर्शकमाझ ल्याइन्छन् । यसले नेपाली चलचित्र नेपामा मात्र सिमित छैनन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यही मेसोमा आगामी असोज ५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको […]
काठमाडौं । जापानको टोकियोमा आइतबार सम्पन्न हुन लागेको ‘सूर्य इन्टरनेशनल अवार्ड–२०१८’ मा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा दुई हस्ती बसुन्धरा भुषाल र भुवन केसी सम्मानित हुने भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पु¥याएको अतुलनीय योगदाको कदर गर्दै यी दुई कलाकारलाई सम्मान गर्न लागिएको आयोजक संस्था सूर्य कर्पोरेशन ले जनाएको छ । कार्यक्रममा दुई जना पत्रकार […]
काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत गत शुक्रबारबाट मुलुकभरका विभिन्न हलमा प्रदर्शनमा आएको ‘साली कस्को भेनाको’ चलचित्रले प्रदर्शनको पहिलो दिने दर्शकको औसत साथ पाएको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिनभन्दा दोस्रो दिन अर्थात शनिबार हलमा केही बढी दर्शकले चलचित्र हेरे । त्यसो त चलचित्रको अवतरण सहज भने छैन । गत साताबाट प्रदर्शनमा आएका दुई चलचित्र रामकहानी र […]
खुश्बु ओलीले पाइन् एएफसी ड्रिम एसिया अवार्ड
काठमाडौँ – असाहय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी नेपालकी खुश्बु ओलीले एसियाली फुलब फेडेरेसनले प्रदान गर्ने एएफसी ड्रिम एसिया अवार्ड पाएकी छन् । आश्रय बिहीन बालबालिकालाई आश्रय दिँदै आएकी सेल्टर नेपालकी अध्यक्ष ओलीलाई एएफसीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सम्मेलनको समारोहमा बुधबार एएफसी ड्रिम एसिया अवार्ड २०१८ प्रदान गरेको हो । ओलीसहित जुरिच मलेसिया र वर्ल्ड भिजन […]
वर्षा ‘बकम्फुसे राजा’की रानी बन्न तयार !
काठमाडौं । अभिनेत्री बर्षा राउतले संचारकर्मी प्रकाश सुवेदीले निर्देशन गर्न लागेको सिनेमा बकम्फुसे राजामा काम गर्ने पक्का भएको छ । उनले चलचित्रका लागि सम्झौता पनि गरिसकेकी छिन् । २ हिरोइन र एक हिरोको यो सिनेमालाई कमेडी जनरामा बनाउन लागिएको छ । सिनेमाका लागि अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीलाई पनि अफर गरिएको छ । तर, बर्षा सिवाकोटीले सिनेमामा […]
मनोजको चलचित्रमा आगमन कस्तो रहला ?
काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार सन्देश बोकेको फिल्म ‘सयकडा दश’ अब प्रदर्शनका लागि तयार भएको छ । मनोज गजुरेल स्टारर सोसल ड्रामाले माघ १८ गतेलाई रिलिज डेट तोकेको छ । चलचित्रको प्रदर्शन मिति तोकेसँगै निर्माण पक्षले चलचित्रको प्रमोशनमा जुटेको छ । शनिबार ललितपुर हात्तिवनमा आयोजित समारोहमा निर्माताले मिति घोषणा गरे । उक्त अवसरमा स्थानीय मानव सेवा […]
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समय बीग बजेटका चलचित्रको रोचक भिडन्त हुन थालेको छ । एकपछि अर्को गरी एकै मितिमा बीग बजेटका चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याइँदा त्यसको असर निर्माता तथा निर्देशकलाई मात्र परेको छैन, प्रत्यक्ष मारमा चलचित्रका कलाकार परेका छन् । त्यसो त चलचित्र चलोस् नचलोस् कलाकारले बुझ्ने पारिश्रमकि हो बुझिहाल्छन् । यसअर्थमा कलाकारलाई चलचित्र […]
प्रदीप र पूजामध्ये दर्शकको साथ कस्लाई ?
काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत गत शुक्रबारबाट दुई चलचित्र ‘रामकहानी’ र ‘रोज’ प्रदर्शनमा आए । यी दुबै चलचित्र दर्शकका लागि भन्दा पनि निर्देशक तथा चलचित्रका कलाकारका लागि निकै नै प्रतिस्पर्धी चलचित्रका रुपमा हेरियो । चलचित्र प्रदर्शनमा आएसँगै दुबै चलचित्रको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेको छ । निर्माण पक्षले भने आ–आफ्नो चलचित्रले राम्रो व्यापार गरिरहेको दाबी गरिरहेका […]